Filtrer les éléments par date : samedi, 12 septembre 2020
samedi, 12 septembre 2020 20:12
Sekolim-panjakana: Misy mampandoa saram-pisoratana anarana
Sanganehana ny ray aman-dreny mampiana-janaka amin’ny sekolim-panjakana eto an-drenivohitra rehefa nandray taratasy avy amin’ny sekoly ianaran’ny zanak’izy ireo, milaza ireo taratasy ilaina sy ny vola aloa amin’ny fisoratana anarana.
Taorian’ny fanambarana nataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny alahady 6 septambra, nohamafisin’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Sahondrarimalala Marie Michelle fa maimaimpoana ny fisoratana anarana amin’ny sekolim-panjakana dia mihevitra ireo ray aman-dreny fa tsy misy fanavahana izany, fa mihatra ho an’ny EPP, CEG ary Lycée.
Nisy rangahy iray mpividy omby voatafik'ireo tsy matahotody tao amin’ny Kaominina Marovantaza, Distrika Analalava.
Noho ny fiarahamientan'ny vahoaka anefa, avotra ilay rangahy saingy naratra. Nentina haingana tao amin’ny hopitalibe Antsohihy izy. Nahazo fitsaboana sahaza, ary tsy misy atahorana ny ainy.
Efa eo ampelatanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha.
Nihetsika indray ireo tantsahan'i Betafo io maraina io ho valin-kafatra ho an'ny Minisitry ny fambolena sy ny fiompiana. Nambaran'izy ireo fa tsy vahaolana ny fampidirana omby avy any ivelany ambaran'ny minisitra fa ny fanokafana ny orinasa Triple A izay mahavidy ronono betsaka sy amin'ny vidiny lafo no vahaolana.
Taorian'ny fanariana ronono ny sabotsy lasa teo dia nitondra mpandraharaha avy any amin'ny Distrika Ambatolampy ny lehiben'ny Distrika ary nampihaonina tamin'ny tantsaha fa afaka mividy ronona faran'izay betsaka, saingy 1 200 Ariary ny iray litatra, ary amin'ny fahavaratra kosa dia 1 100 Ariary.
samedi, 12 septembre 2020 19:41
12 septembre: Journée Internationale des Nations-Unies pour la coopération Sud-Sud
12 septembre: Journée Internationale des Nations-Unies pour la coopération Sud-Sud.
12 septembre: Journée Mondiale des premiers secours.
samedi, 12 septembre 2020 19:36
12 septembre: Journée Mondiale des programmeurs et développeurs.
samedi, 12 septembre 2020 19:31
Vohémar – Sambava: Mampitaraina ny maro ny « racket » ataon’ny mpitandro filaminana
Sady maro ny sakana fisavana fiara sy moto, no mbola anjakan’ny « racket » na ekôlazy amin’ny mpitandro filaminana, izay matetika miendrika fanararaotam-pahefana ka mampitaraina ny maro mampiasa ny lalana Vohémar – Sambava.
Gare Routière Aranta – Mahajanga: Manohitra ny fametrahana "Caisse unique" ny mpiasa sasany
Fihetsiketsehana vao maraina, narahina filanjana sorabaventy, no tazana teo amin’ny Gare Routière Aranta – Mahajanga androany sabotsy 12 septambra 2020.
Manohitra ny fametrahana "Caisse unique" ny mpiasa sasany.
samedi, 12 septembre 2020 15:14
Lalam-pihariana hazo: Nisy ny fihaonana nitadiavam-bahaolana teo amin’ny ministera sy ny mpandraharaha
Ny volana janoary 2019 ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy - MEDD - dia namoaka naoty laharana N°01/19/MEDD izay mandrara ny fitrandrahana ny hazo. Tafiditra tao anatin’izany na ny hazo sarobidy na ny hazo tsotra.
Vokatr’izany dia mandalo kirizy mavesatra ireo orinasa ara-dalana mpisehatra amin’ny fitrandrahana sy fanodinana hazo eto Madagasikara, ary efa misy ny manakatom-baravarana vokatry ny tsy fisian’ny akora ho ampiasaina.
Nangataka fihaonana tamin’ny Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy izy ireo mba hijerena miaraka ny vahaolana amin’ny seham-pihariana sahaniny.
Notanterahina ny zoma 11 septambra izany fihaonana nitadiavam-bahaolana teo amin’ny roa tonta izany, izay notarihin’ny Minisitra Raharinirina Baomiavotse Vahinala, sy ny tompon’andraikitra avy amin’ireo orinasa maro, toy ny : Hazovato, Bonet, Tropical Woods, GNEFEM, Kidoro, Eben Menuiserie, Kinga,…
samedi, 12 septembre 2020 13:56
CHU Tanambao Antsiranana: Samy mitaraina na ny mpiasan’ny fahasalamana na ireo manana marary tsaboina ao
Sorabaventy samihafa maneho ny alahelon’ny mpiasan’ny fahasalamana no tazana eo amin’ny hopitaly manarapenitra Tanambao Antsiranana taorian’ny nanesoran’ny fanjakana tamin’ny toerany ny Talen’ny hopitaly.
Marihina fa nofoanana nandritra ny Filankevitry ny minisitra natao teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha-ny alarobia 09 septambra 2020 ny didim-panjakana laharana faha-2019-2220 tamin’ny 11 desambra 2019 nanendrena ny «Directeur d’Etablissement Centre Hospitalier Universitaire Tanambao Antsiranana ».